Donald Trump oo wajahaya cadaadis ku aadan siyaasadiisa ka dhanka ah muhaajiriinta | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Donald Trump oo wajahaya cadaadis ku aadan siyaasadiisa ka dhanka ah muhaajiriinta
Donald Trump oo wajahaya cadaadis ku aadan siyaasadiisa ka dhanka ah muhaajiriinta
Arrintan ayaa imaneyso iyadoo dhawaan muhaajiriin doonayay inay galaan Mareykanka ay caruurtooda ku kala tageen xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico.
Xaaska Madaxweyne Trump Melanie Trump iyo xaaska madaxweyne hore oo Mareykanka ah ayaa walaac ka muujisay qaabka madaxweyne Trump uu u wajahayo muhaajiriinta.
Bayaan ay soo saartay Melania Trump ayaa waxa ay ku sheegtay inaysan jecleyn inay aragto caruur laga fogeynayo qoysaskooda.
Iyad oo si aan buurneyn u naqdienyso qaabka uu zowjkeeda waa madaxweyne Trump e uu u wajahayo siyaasada socdaalka ayaa waxa ay sheegtay in sharciyada Mareykanka ay tahay in la raaco sidoo kale ay tahay haatan dalka in si daacad ah loo maamulo.
Laura Bush oo ku nool xadka goblka Texas laguna qoray warbixinteeeda wargeyska Washington Post ayaa waxa ay ku tilmaantay in siyaasada dulqdaas la’aanta muhaajiriinta ay tahay mid foolxun, damiir la’aan ah iyo qalbi jab.
Waxa ay sheegtay in sameyntta magaalooyin la dejiyo caruurta walidkood laga fogeeyo iyo in loo badelo goobaha ganacsig meel lagu xareeyo caruurta inay kadhigan tahay xasuus cabsi ku dheehan oo la mid ah xerooyinkii laga soo buuxin jiray maxaabiistii Japan ee Mareykanka xiligii uu socday dagaalkii labaad ee dunida.